Ambodihady – Ambohimanarina : Nitsoaka ny mpamilin’ilay 4×4 nahafaty ramatoa iray | NewsMada
Ambodihady – Ambohimanarina : Nitsoaka ny mpamilin’ilay 4×4 nahafaty ramatoa iray
Maty tsy tra-drano ity ramatoa iray, nofaohin’ny fiara 4X4, omaly vao maraimbe, teny Ambodihady Ambohimanarina. Nitsoaka nandositra ilay mpamily, raha nitolo-batana tany amin’ny polisy kosa ilay niaraka taminy.
Nofaohin’ny fiara 4×4 teny amin’ny lalam-baovao “Rocade” Ambodihady Ambohimanarina, omaly tamin’ny 4 ora maraina ireo mpivady nanao fanatanjahantena vao maraina tamin’ny sisin-dalana teo amin’ny sampanan-dalana Ambodihady sy ny lalam-baovao “Rocade”. Nandeha mafy ny fiara 4×4 iray avy any amin’ny lalam-baovao ka nanitsy avy hatrany tany amin’izy mivady. Nipitika tany an-tanimbary ilay ramatoa. Ilay fiara kosa nivadibadika ambony ambany. Nivoaka tao anaty fiara tsy nisy naratra ireo roa lahy tompon’antoka tamin’ny loza ka nanampy ilay niharam-boina. Nisy fiara P. 404 baché nandalo ary niangavian’izy ireo mba hitondra ilay ramatoa any amin’ny hopitaly. Nilaza ny vadin’ilay ramatoa tamin’io fotoana io fa tokony mba hanaraka hiaraka amin’izy mivady any amin’ny hopitaly koa izy roa lahy. Tsy hita tampoka anefa izay nanjavonan’izy roa lahy taorian’izay fa ny vadin’ilay ramatoa irery no nitondra am-badiny teny amin’ny hopitaly.
Nitolo-batana teny amin’ny polisy…
Tonga teny an-toerana nitrangan’ny loza ny polisy avy ao amin’ny brigade des accidents de la circulation (BAC) Tsaralalana. Rehefa nanao fikarohana ny BAC izay niainga tamin’ny fitadiavana ny tompon’ny fiara dia fantatra ihany ny iray tamin’ireo roa lahy izay nitondra ilay fiara 4×4 nandona ilay renim-pianakaviana. Tonga tao amin’ny biraon’ny BAC, omaly maraina ihany ilay lehilahy iray 43 taona, nitsoaka niaraka tamin’ny mpamily rehefa avy nandona ka nahafaty ilay renim-pianakaviana niharam-boina satria fantany fa nifampitadiavan’ny polisy izy. Nampahafantarin’ny havany azy rahateo fa tadiavin’ny polisy izy tamin’io fotoana io.
Nanamafy hatrany ny polisin’ny BAC fa nahitana tavoahangina labiera maromaro tao anatin’ilay fiara 4×4 nandritra ny fisavana nataon’izy ireo teny an-toerana. Antony izay nahatonga izao loza namoizana ain’olona izao koa izany satria efa mamo izy roa lahy ireto. Miatrika fanadihadiana eny amin’ny polisin’ny BAC Tsaralalana, araka izany, ny naman’ilay mpamily nahavanon-doza. Mbola ifampitadiavan’ny polisy kosa ilay mpamily nolazain’ilay namany fa nitondra ilay fiara ka nahatonga izao loza izao.
Fa naratra mafy koa ny ankizivavy roa mpianatra ao amin’ny CEG Mahitsy nofaohin’ny kamiaobe iray hihazo an’Antsiranana tao Bemandona fokontany Amboninilemaka Mahitsy, afakomaly. Voalaza fa nisongona olona nitaingina bisikileta tao anaty fiolahana ilay kamiaobe ka nifatratra tany amin’ireo niharam-boina. Naratra mafy ilay mpitondra bisikileta sy ireo ankizivavy roa. Tsy vitan’izay fa mbola nifatratra tamin’ny andrin-jiro telo ilay kamiaobe. Tapaka ireo andrin-jiro telo voadona. Tonga nanao fanadihadiana teny an-toerana ny zandary avy ao amin’ny borigadin’i Mahitsy.